अमेरिकी जनगणनाका बारेमा बुझ्नैपर्ने तथ्यहरु -डाक्टर अर्जुन बन्जाडे | Nepalese Diaspora
अमेरिकी जनगणनाका बारेमा बुझ्नैपर्ने तथ्यहरु -डाक्टर अर्जुन बन्जाडे
जनगणनामा कहिले र किन हुँदै छ ?
अमेरिकाको संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार प्रत्येक दश वर्षमा जनगणना हुन्छ । यो अमेरिकाको अलास्का राज्यमा सुरु भईसकेको छ भने अन्य राज्यहरूमा मार्चको दोस्रो हप्तादेखि सुरु हुँदै छ । र आफ्नो विवरण आफै दिएर फर्म भर्ने म्याद अप्रिल १ सम्म छ । यदि यसो नगरेमा तथ्याङ्क विभागले फर्म नभर्ने घरमा मे महिनादेखि फर्म भर्न मानिसहरू पठाउँछ। अमेरिकी कानुनले आगामी जनगणनाको नतिजा यो वर्षको अन्तिम दिनसम्म (December 31, 2020) राष्ट्रपतिलाई बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
के कस्ता प्रश्नहरू सोधिन्छन् ? के नेपाली भाषामा पनि फर्म भर्ना मिल्छ ?
जनगणनामा शोधियका प्रश्नहरू सजिलैसँग उत्तर दिन सकिन्छ । यसमा व्यक्तिको नाम, उमेर र जन्म मिति, महिला वा पुरुष के हो, हिस्पानिक हो वा होइन र मुख्य प्रश्न Race अर्थात व्यक्तिको जातियता के हो भन्ने प्रश्न । यसका अलावा घरमा कति जना बस्छन्, बसोबास गरिरहेको आफ्नो निजी घर हो कि भाडामा हो, र व्यक्तिको घरको मुख्य व्यक्तिसँगको नाता के हो जस्ता प्रश्नहरू सोधिन्छन् । चार जना भएको एउटा परिवारका सबैको उत्तर दिन १० मिनेट पनि लाग्दैन । नेपाली सहित ५९ भाषामा जनगणना सम्बन्धी सामाग्री छन् तर नेपालीमा फर्म भने छैन; फर्म अङ्ग्रेजीमा नै भर्नु पर्छ ।
के जनगणनामा परिवारको आय आर्जन वा राजनीति वा व्यक्तिको धर्म वा इमिग्रेसन सम्बन्धी प्रश्न सोधिन्छ ?
सोधिँदैन । जनगणनामा व्यक्ति वा परिवारको सम्पत्ति र आय सम्बन्धित कुनै पनि प्रश्न सोधिएको छैन; राजनीतिक सम्बन्ध वा धर्म सम्बन्धी पनि कुनै प्रश्न सोधिएका छैन । त्यस्तै, व्यक्तिको अमेरिकामा इमिग्रेसन अर्थात् आप्रवास सम्बन्धी कुनै प्रश्न सोधिएको छैन । त्यसैले जुनसुकै स्टाटसमा भएकाले पनि ढुक्कसँग जनगणनामा भाग लिनुपर्छ ।
के जनगणनामा सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनै पर्छ ?
अमेरिकाको कानुन (Title 13 of the U।S। Code § 221) ले अमेरिकामा बस्ने सबैले जनगणनामा भाग लिने पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो कानुनले यदि कुनै व्यक्तिले भाग नलिएमा वा गलत सूचना दिएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई जरिवाना समेत हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले हामी सबैले सबै प्रश्नको उत्तर दिनु पर्छ ।
जनगणनामा भाग लिन के गर्नु पर्छ ?
अमेरिकी जनगणनामा भाग लिन सजिलो छ । अमेरिकी तथ्याङ्क विभागले मार्च महिनाको दोस्रो हप्ता सबै ठेगानाहरूमा जनगणनामा भाग लिन अनुरोध गर्दै पत्र पटाउँछ जसमा त्यो ठेगानाको जनगणनाको कोड (Census Code) के हो, कुन वेबसाईट (Website) मा गएर आफ्नो विवरण भर्न सकिन्छ वा कुन नम्बरमा फोन गरेर यसमा भाग लिन सकिन्छ भन्ने जानकारी समेत हुन्छ ।
हामी नेपालीहरूको पहिचान कसरी खुल्छ ?
जनगणनाको प्रश्न पत्रमा एउटा प्रश्न छ – यो व्यक्ति हिस्पानिक हो वा होइन भन्ने । केही अपवादलाई छोडेर सबै नेपालीको उत्तर &#39;होइन&#39; भन्ने हुन्छ । अर्को प्रश्न छ त्यो हो – व्यक्तिको जातियता (Race) के हो ? यो एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । यो प्रश्नको उत्तर सही तरिकाले दिएमा नेपाली पहिचान खुल्छ । हाम्रो अनुरोध के छ भने व्यक्तिको जातियता के हो भन्ने प्रश्नको उत्तर दिँदा अन्य एसियाली (&quot;Other Asian&quot;) छानी खालि ठाउँमा नेपाली (&quot;Nepali&quot;) लेख्नुपर्छ । यसो गरिएको अवस्थामा नेपालीको पहिचान सहित गणना हुन्छ र नेपालीहरूको अमेरिकामा भएको सङ्ख्या थाहा पाउन सम्भव हुन्छ ।
के हाम्रा उत्तरहरू गोप्य रहन्छन् ?
अमेरिकी कानुनले (Title 13 of the U।S। Code ) जनगणनाका व्यक्तिगत विवरण गोप्य राख्न पर्ने व्यवस्था गरेको छ र यदि कसैले यो कानुनको उलङ्घन गर्छ भने उसलाई पाँच वर्षसम्म जेलको सजाए र $ २५०,००० सम्म नगद जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तथ्याङ्क विभागले व्यक्तिगत विवरण जस्तै नाम, ठेगाना, जन्म मिति र उमेर जस्ता सबै विवरण हरू ७२ वर्ष सम्म गोप्य राख्नु पर्छ; अन्य व्यक्ति वा सरकारी निकायलाई कसैको व्यक्तिगत विवरण दिन मिल्दैन ।
यो ७२ बर्से नियम के हो?
अमेरिकी कानुनले (92 Stat 915। Public Law 95-416) ले जनगणनाका कुनै पनि व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरण अन्य कुनै व्यक्ति वा सरकारी निकायलाई जनगणना भएको मितिले ७२ वर्षसम्म दिन मिल्दैन । अर्थात्, अहिलेको जनगणनाको व्यक्तिगत विवरणहरू सन् २०९२ को अप्रिल २ सम्म सम्बन्धित व्यक्ति बाहेक अरू कसैलाई थाहा हुँदैन । जनगणनाका विवरणहरू व्यक्तिका पूर्वज बारेमा अनुसन्धान गर्न निकै उपयोगी हुन्छन् । यी विवरणहरू कानुन त ७२ वर्ष पछि सार्वजनिक गर्नु पर्छ । यो वर्षको जनगणनामा भरिएका व्यक्तिगत विवरणहरू सन् २०९२ सालको अप्रिल २ पछि मात्र सार्वजनिक हुन्छन् । यही नियमले गर्दा सन् १९४० को जनगणनाका विवरणहरू अप्रिल २, २०१२ मा सार्वजनिक गरिएका छन् । सन् १९५० वा त्यस पछि का जनगणनाका विवरणका सम्बन्ध मा भिन्नै नियम छ – यदि कुनै व्यक्ति वा उसको कानुनी सन्तानले जनगणनामा के विवरण भरेको थियो भन्ने जानकारी लिन चाहेमा आवश्यक कागजात र दस्तुर तिरी निवेदन दिन सक्छन् । तर सम्बन्धित बाहेक अन्यले यो जानकारीको लागि निवेदन दिन पाइँदैन र जनगणनामा भएको कुनै पनि विवरण सच्याउन पनि पाइँदैन ।
के यो जनगणना गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ, अमेरिकाले गर्न लागेको हो?
होइन । यो जनगणना अमेरिकी सरकारले गर्दै छ । अन्य सङ्घ संस्थाहरूले जस्तै एनआरएनए, अमेरिकाले आफ्ना सबै च्याप्टरहरू (Chapters) र च्याप्टर नभएका राज्यहरूमा फोकल पर्सन (Focal Person) लाई सक्रिय बनाई जनगणनाको प्रचारप्रसार मात्र गरेको हो । दश वर्षमा आउने जनगणनामा एनआरएनए, अमेरिका मात्र नभई अमेरिकामा सक्रिय सबै सङ्घ संस्थाहरूले हातेमालो गरी जनगणनाको प्रचारप्रसार गर्नु पर्छ र सबै नेपालीहरूलाई आफ्नो पहिचान खुल्नेगरी आफ्नो विवरण भर्न प्रेरित गर्नु पर्दछ ।
Senior Vice President (2019-2021)
यो पनि पढ्नुहोस : पर्यटन दुत ज्ञान प्रसाद रिमालद्वारा नेप्लिज डायस्पोरालाई शुभकामना
एमसीसीका बारेमा अमेरिकाका लागि पुर्व नेपाली राजदुत…
डाक्टर महाबिर पुनले क्यालिफोर्नियाका नेपालीहरुसंग भेट्ने
जोग सन्जोग कार्यक्रममा डाक्टर रामशरण महत
डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई अहिलेसम्मकै कडा प्रश्न । U…
डाक्टर उत्तम गौली अमेरिकामा सम्मानित
हलो जोत्दै डाक्टर भट्टराई भन्नुहुन्छ-किसानको…
सानो डाक्टर (बालकथा) - पुष्प अार.जे.